Khudbadihii M/weyne Shariif Axmed, afhayeen Shariif Xasan & R/wasaare Gaas ee magacaabida R/wasaaraha. – Radio Daljir
Muqdisho, Jun 23 – Madaxda dawlada federaalka ah ee Somaliya ayaa khudbado ka jeediyey munaasabadii lagu magacaabay R/wasaaraha cusub ee dawlada federaalka ah ee Somaliya Prof. C/Weli Maxamed Cali ‘Gaas’.
M/weyne Shariif oo furitaanka munaasabada iclaamiyey in R/wasaaraha cusub loo magacaabay Prof. C/weli ayaa sheegay in magacaabidu ay ku timid wada-tashi, tixgelin iyo u doorasho aqoon iyo karti. Waxaa uu intaas ku daray in uu Prof. C/weli yahay nin ku haboon xilliga lagu jiro, kana soo bixi kara.
Afhayeen Shariif Xasan oo isna munaasabada ka hadlay ayaa soo dhaweeyey magacaabida R/wasaare Gaas, sheegya in uu la shaqayn doono xukuumada cusub, kuna baaqay in khilaafaadkii hore la iska ilaawo.
R/wasaare C/weli Maxamed Cali ‘Gaas’ ayaa ballan qaaday in uu dejin doono qorshe siyaasadeed looga bixi karo dhibaatada ka jirta Somaliya.
Waxaa uu ballan qaaday midnimada iyo soo celinta qaranimada Somaliya.
Waxaa uu ballan qaaday in uu sii wadi doono qorshihii siyaasadeed ee xukuumadii hore ee R/wasaare Farmaajo.
Waxaa uu xusay in uu culayska saari doono daryeelka ciidanka, la dagaalanka musuq-maasuqa, xeerinta danta guud, ka faa’iidaysiga awoodda ummadda, iyo iska ilaalinta khilaafaadka.
Waxaa uu ugu baaqay shacabka Somalida is-kaashi, iyo ka wada saqayn danta guud ee dalka iyo dadka; qurbajoogta ayaa uu ugu baaqay in ay halganka sii wadaan, aanay niyad jabin, ayna gacan ku siiyaan hiigsida iyo hirgelinta qorshe siyaasadeedka xukuumadiisa.
Waxaa uuu gu baaqay beesha caalamku in ay gargaar iyo taageero dhab ah la barbar istaagto Somaliya.
R/wasaare Gaas waxaa uu ballan qaaday in uu dhisi doono xukuumad tayo leh oo qancin doonta madaxda iyo shacabka Somalida, oo sida uu xusay in ay la tayo ahaato mooyee aanay ka tayo liidan doonin tii hore (xukuumadii R/wasaare Farmaajo) – waxaa uu ku ammaanay R/wasaare Farmaajo in uu dejiyey halbeeg aad u sareeya, isna uu ku dadaali doono in aanu kaas hoos uga soo dhicin.